Global Voices teny Malagasy » Japana : Ny Fankafizàna Saka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Novambra 2018 11:02 GMT 1	 · Mpanoratra Scilla Alecci Nandika (fr) i Claire Ulrich, nirinandrea
Sokajy: Japana, Hehy, Hevitra, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Saripika, Zavakanto & Kolontsaina
Tsy zava-baovao anaty aterneto ny firoboroboan'ireo vondron'olona mitovy zavatra ankafizina. Miara-mizara torohay, tolo-kevitra ary sarin'ireo hetsika na zavatra iarahan'izy ireo ankafizina ireo mponina anaty aterneto ireo.
Avy amin'ilay mpampiasa Flickr id:WasabiNoise
Ao Japana, tsy ny fanalana andro ihany no lohahevitra hany resahina ao anaty aterneto : Ny fitiavana ny biby naman'ny olombelona no resaka isan'ny tena malaza anaty blaogy. Ny saka, indrindra indrindra, dia maka ny laharana voalohany amin'ny filaharan'ny “blaogy momba ny biby”  [japone] ary blaogera maro no manokana pejy iray manontolo ho an'ireo saka namany ireo. Misy karazany maro ireo blaogy ireo : Ny blaogy ho an'ny saka mainty sy fotsy (Toy ity eto ity ), ny saka matavy, ny saka fohy volo, ny saka lava volo, sy ny maro hafa, na koa, ny blaogy momba ireo toerana mety ahitàna saka (Toy ity eto ity )
Blaogera vavy iray no nitondra fanazavàna mikasika ny fankafizàna saka mainty.
Marobe ny olona mankafy saka mainty. Ny saka rehetra mifanena aminy dia toa mampahatsiahy azy ireo ny azy ary izany no mahatonga ny boky natokana ho an'ny saka mainty mora amidy be toy ny mofo dipaina. Misy kojakoja maro be sy zavatra maro hafa koa maneho ireo saka.
Matetika, lasa lavitra noho ny fiezahana mandika ny “fihetsempon'ny” sàkany avy ny zavatra ataon'ireo tompony, tahaka ny ataon'i nana  ao anatin'ity lahatsoratra ity.
Tany amin'ny hopitaly natao ho an'ny saka aho. Feno saka lahy sy vavy tao ary tena niraiki-po be amin'ny olombelona izy ireo, miaou.
Mahazo aina be izy ireo eo anivon'ny olombelona , sy eo amin'izy samy izy.
Saka hendry kely !
Nomeny safosafo be dia be aho, ka dia norofiko izy ireo hamaliako ny fahalalam-pombany (poh)
Tsy mijanona eo amin'ny tontolon'ny blaogy fotsiny ihany ny fankafizàna saka, toy ny anaporofin'ilay horonantsary vao nivoaka Watashi wa Neko Stalker  (私は猫ストカー, mpitsongo dia saka aho) [amin'ny teny japone], nalaina tamin'ilay boky mitovy lohateny aminy nosoratan'ilay mpanao sary fanaingoana Harumin Asao  (浅尾ハルミン）[japone], nivoaka ny taona 2005. Ny mpilalao fototra ao aminy dia zazavavy mpitsongo dia saka ary tia “mitsikilo” azy ireo mba handinihana ny fiainana an-davanandron'izy ireny.
Indro ny fanehoankevitra  iray amin'io horonantsary io, navoakan'ilay vehivavy mpitoraka blaogy izay milaza ny tenany ho “mpitsongo dia saka”.
Tsy dia mazava ilay tantara ary ilay horonantsary, notontosaina tany amin'ireo tanàna milamina any amin'ny manodidina an'i Tokyo, dia mirona kokoa any amin'ny fanadihadiana, amin'ny fanoritsoritana ny fiainan'ilay zatovo vavy manenjika saka.
Tamin'ny fotoana nahitàko ilay ampahany izay nisy ilay zatovo vavy nikaroka ireo saka ary naka sary azy ireo, ary nokianin'ny olona manodidina, dia hoy aho hoe,“Ah, ohatran'izao koa izany no fahitan'ny olona ahy !” Misy fotoana ao anatin'ilay horonantsary manazava ny fitsongoan-dia saka.
Ireo olona rehetra nivanitinika tao anaty efitrano fijerena sarimihetsika ireo izany dia mpitsongo dia saka avokoa. Tsy isalasalàna .
(Oh andraso aloha, izaho izany resahina eto izany.).
Fampahafantarana ny Watashi wa Neko Stalker
Tonga ihany, ary farafaharatsiny ao Tokyo, tsy lany hetsika ireo mpitia saka ahafahan'izy ireo mihaona sy mampiseho ny sakany avy. Ankoatran'ny fifaninanana sary “Mpitsongo dia saka ” nokarakaraina ho famoahana ilay horonantsary, notohanan'i Bandai Namco ihany koa ilay hetsika fifaninanana sary “Asehoy ny sakanao ” (猫自慢写真コンテスト) izay nahitàna mpandray anjara 1 500 araka ny voalazan'ny id:bengalcat  [japone], ary 3000 no fitambaran'ny sary voaray.
Iray tamin'ireo mpandresy tamin'ilay fifaninanana , izay namoaka ny sarin'ny sàkany miomana miomana hitsambikina, no nilaza ny tsapany tamin'ny fotoana namoahana ny valin'ilay lalao.(Indrisy anefa fa tsy afaka avoakanay eto ilay sary noho ny antony fizakàmanana)
Ny tena nahafaly ahy indrindra dia ny fotoana nanehoana ny sariko teo amin'ilay efijery, ary rehefa nihomehy mafy ny olona. Nisy mihitsy aza zaza nananihany namerina ny fihetsik'ilay saka teo amin'ilay sary. Tsy misy tsara noho ny fahitàna ny olona mijery ilay sary ka manao hoe “Mahafinaritra !”, “Mampihomehy !”, na dia anatin'ny fotoana fohy ihany aza.
Lasa fitadiavan'ny sasany vola ihany koa amin'izao ny fankafizàna saka, araka ny fanazavan'ny  Yoshimura-san. Raha toa ka mitaraina ny amin'ny fitombon'ny saka mpirenireny ny mponina ao amin'ny tananàn'i Owase, ao amin'ny prefektioran'i Mie, ny Nosin'i Tashiro  [japone] ao amin'ny prefektioran'i Miyazaki (mponina 71 momnja no ao ary tsy misy zaza) izay raisin'ny olona ho toy ny paradisa ho an'ireo mpitia saka.
Omaly aho nijery fanadihadiana naharitra 20 minitra mahakasika ilay “Paradisan'ny saka”, tao amin'ny fahitalavitra NHK  [japone], nosy izay ny saka no mahasarika mpizahantany ho ao . […] Mahatalanjona ny mahita ireo saka ao amin'ilay nosy tena zatra olona ka tsy mitsoaka mihitsy. Kanefa hitako fa na dia ny saka mpirenireny aza, izay tsy manaraka olona dia tena mahafatifaty.
Tena zava-dehibe tokoa ny fisarihana olona maro ao amin'io tanàna io. Ary mety hanova zavatra ratsy anefa izany, ny fitomboan'ny saka, ho zavatra ahazoana tombony, izay hisarika ireo mpizahantany sy mety hahasoa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/20/128200/
 “blaogy momba ny biby”: http://www.blogmura.com/community/subcategory
 eto ity: http://hanaballoon.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_b9f7.html
 eto ity: http://www.cats-blog.com/
 Watashi wa Neko Stalker: http://nekostalker.jp/
 Harumin Asao: http://kikitodd.exblog.jp/
 “Mpitsongo dia saka: http://nekostalker-p.jugem.jp/
 Asehoy ny sakanao: http://www.namja.jp/nekojiman/
 araka ny voalazan'ny id:bengalcat: http://plaza.rakuten.co.jp/bengalcat/diary/200907060000/
 mpandresy tamin'ilay fifaninanana: http://neco-ideas.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/post-32a2.html
 ny fanazavan'ny: http://bg66.soc.i.kyoto-u.ac.jp/forestgps/gpsdiary/archives/2009/06/post_296.html
 Nosin'i Tashiro: http://www.npo-tashirojima.jp/main.html
 mahakasika ilay “Paradisan'ny saka”, tao amin'ny fahitalavitra NHK: http://www.nhk.or.jp/20min/onair/20090611.html